Dhaqaatiir Muslimiin ah oo ka mid noqday dadkii Ingiriiska ugu geeriyooday Cudurka Coronavirus - Jowhar Somali news Leader
Home News Dhaqaatiir Muslimiin ah oo ka mid noqday dadkii Ingiriiska ugu geeriyooday Cudurka...
Dhaqaatiir Muslimiin ah oo ka mid noqday dadkii Ingiriiska ugu geeriyooday Cudurka Coronavirus
Dhaqaatiirta Muslimiinta UK ee laga tirada badan yahay ayaa markii ugu horeysay ku dhintay safka hore ee faafitaanka Cudurka Coronavirus, iyagoo la dagaalamayay cudurada kale ee dadka qabaan.
UK ayaa abaal marin ku bixineysa dhaqaatiirta ugu horeysa ee safka hore ugu dhintay cudurkan COVID-19.
Afart dhaqtar oo lagu kala magacaabo Alfa Sa’adu, Amged el-Hawrani, Adil El Tayar iyo Habib Zaidi waxay ahaayeen Muslimiin asalkooda ka soo jeeday Afrika iyo Aasiya
Dr Salmaan Waqar, oo ah Xoghayaha guud ee Ururka Caafimaadka Islaamiga ah ee Ingiriiska, ayaa sheegay in tabarucaadka dhakhaatiirtan ay tahay “mid aan la dafiri karin”.
“Waxay ahaayeen rag qoys oo karti leh, dhakhaatiir sare u shaqeeyey, sannado badanna u heellan sidii ay ugu adeegi lahaayeen bulshadooda iyo bukaannadooda”ayuu yiri.
“Waxay bixiyeen naf-hurnimadii ugu dambaysay iyaga oo la dagaallamaya cudurkan. Waxaan ku boorinaynaa qof walba inuu kaalintiisa ka qaato oo ka joojiyo dhimashada intaas ka sii badan inay dhacdo” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Amged el-Hawrani oo ah 55 jir u dhashay dalka Suudaan, wuxuu ahaa la taliye ku taqasusay daweynta xanuunnada dhegaha, sanka iyo cunaha waxaa uu ka ahaa cisbitaalada jaamacadaha ee waqooyiga Ingriiska, waxaana uu geeriyooday Sabtidii la soo dhaafay.
Walaalkiisii ​​ka yaraa Amal ayaa ku ammaanay tallaabada oo si iskii u qaatay, gaar ahaan culayska dadka kale inuu si mutadawacnimo ah ugu shaqeynayay dadka bukaanada ah.
Habib Zaidi oo ah Dhaqtar guud oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan, Habib Zaidi wuxuu u soo guurey Boqortooyada Ingiriiska 50 sano ka hor wuxuuna ka shaqeynayay Koofur bari Ingiriiska,
Habib oo da’diisa aheyd 76 sano jir ayaa u dhintay cudurka COVID-19, waxaa uu go’doonsanaa keligiis, toddobaad kaddib markii loo qaaday isbitaal wuxuu ku dhintay 24 saacadood kadib qaybta daryeelka degdegga ah.
Christine Playle oo 73 jir ah, kana mid aheyd bukaannada hore uu u daaweeyay, isla markaana qalliin yar uu ku sameeyay saddex toddobaad ka hor dhimashadiisa, ayaa sheegtay inay aad uga naxday dhimashadiisa.
Adil El Tayar oo u dhashay dalka Suudaan waa dhakhtar qalliin oo ka tirsan NHS, wuxuu dhintay 25 Maarso, isagoo 64 jir ah, wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Khartoum sanadkii 1982.
El Tayar wuxuu ka shaqeynayay Isbitaalka ‘Hereford County Hospital’ oo ku yaal galbeedka Ingriiska, isagoo iskaa wax u qabso ah ugu shaqeynayay waaxda gurmadka, iyadoo cudurkan safmarka ah uu jiray, waxaa ay qoyskiisa rumeysan yihiin inuu ku dhacay Fayrsaka Coronka.
Waxaa uu bilaabay inuu keligiis is go’doomiyay, markii uu isku arkay astaamaha cudurka, waxaana ugu dambeyn la dhigay Isbitaal.
Safiirka Ingiriiska ee Suudaan Irfan Siddiq, ayaa ammaanay dadaalka aabaha dhalay afarta carruur wuxuuna uga mahadceliyay shaqaalaha daryeelka caafimaadka meel kasta oo ay joogaan inay muujiyeen geesinimo aan caadi aheyn.
Alfa Sa’adu waa Dhakhtar ruug cadaa ah oo u dhashay dalka Nigeria, wuxuu la shaqeeyey NHS ku dhawaad 40 sano, wuxuu u dhintay Talaadadii isagoo jira 68 sano kadib labo asbuuc oo uu la dagaalamayay fayraska.
Wuxuu ku dhashay Nigeria, Sa’adu wuxuu bilaabay meheraddiisa caafimaad isagoo ahaa la taliye caafimaad oo ku takhasusay daawada geriatric markii uu yimid London waxaa uu ka qalin jebiyay Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda University 1976.
Dalka Ingiriiska ayaa hada ku jira xaalad aan caadi aheyn, iyadoo maalin qura ay u geeriyoodeen cudurka Coronavirus dad ka badan 300 oo ruux.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo soo dhisaya Xukuumad Tayo leh (Akhriso 8 Qodob oo saldhig u ah)
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Ra’iisul Wasaare Rooble